Maminitsi makumi matatu Ekunyengeterera Ekukura Kwebhizinesi | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 Minamato Yekunamatira Ekukura Kwebhizinesi
30 Minamato Yekunamatira Ekukura Kwebhizinesi
Zvino Isaka akadzvara munyika iyoyo, ndokuwana mugore iro zvine zana, uye Jehovha akamuropafadza. Zvino murume uyu akakura, akaenderera mberi, achikura kusvikira ava mukuru. 26:12 Nekuti iye waiva nefuma yemakwai nefuma yemombe nevaranda vazhinji; nevaFirisitia vakamugodora.
budiriro uye kukura Kuda kwaMwari kune vana vake vese. Mubhuku ra3 Johane 1: 2, Mwari akajekesa kuti chishuwo chake chikuru ndechekutiona tichibudirira kumberi kwese. Kuti ubudirire zvinoreva kukura uye kukura zvinoreva kufambira mberi. Nhasi tichave tichiita minamato makumi matatu yekunamatira bhizimusi. Iyi minamato yenamato ichakupa simba nehungwaru hwamwari apo paunoshandira kusimudzira nekusimudzira bhizinesi rako. Chero bhizinesi rinogona kukura, chero bedzi iwe uririkuchishandisa nehungwaru hwaMwari. Munamato wangu kwauri nhasi ndouyu, mweya wega wega wekusada uye kusagadzikana kuri kunetsa hupenyu hwako unobvisa kubva kwauri ikozvino muzita raJesu.
Apo a bhizimisi iri kukura, zvinongoreva kuti bhizinesi riri kuwedzera muhukuru, base base, matavi uye ofcourse purofiti. Semwana waMwari, Mwari anoda kuti iwe uwedzere nzvimbo yemahombekombe, Anoda kuti iwe upurire kumativi ese. Haufanirwi kuve muVuchitoro chimwe chete kana hofisi imwe chete, aiwa, Mwari anoda kuti mabhizinesi ako asvike kumagumo epasi. Isaac akatanga kunge murimi, asi akakurira mune dzimwe nzvimbo, sekura kwemombe uye nekuchera zvakanaka. Abrahama aive zvakare murume webhizimusi repasi rese, Jobho aive murume akapfuma kwazvo murudzi Rwake munguva yake yehupenyu. Unotenderwa kutanga diki, asi haubvumidzwe kugara diki. Mwari anoda kuti ukure, Iye anoda kuti iwe uwedzere uye kuve neshanje kune nyika yako. Nekudaro, kuti iwe ukure mubhizinesi rako, iwe unofanirwa kufunga kukura, haugone kufambira mberi iwe wausina kuona. Mwari akaudza Abhurahama kuti iwe unogona kungova nekwaungaonekwa nemeso ako. Izvi zvinongoreva kuti Kusvikira waona kukura mupfungwa dzako, haugone kuikwanira. Iwe unofanirwa kufunga nezve kukura mukati memoyo wako, uzvitende, usati wazviona muhupenyu hwako. Uyu munamato unonongedzera kukura kwebhizinesi kunozovhura pfungwa dzako kubata chiratidzo pane chinotevera chikamu chebhizinesi rako. Ini ndinonzwa nezvezvipupuriro zvekukura kwebhizinesi rako muzita raJesu.
1. Baba, ndinokutendai nekundishuwira kwenyu kukuru muzita raJesu
2. Baba ndinokutendai nekusabvumira kukanganisa kwangu kuparadza mabhizinesi angu muzita raJesu
3. Baba ndinopinda muchigaro chenyu chenyasha kugashira ngoni nenyasha kurarama uye kuita zvakanaka nebhizinesi rangu muzita raJesu.
4. Baba, ini ndinokumbira muve nehungwaru huchenjeri pandinenge ndichiita bhizinesi rangu muzita raJesu
5. Baba, ndipeiwo huchenjeri hukuru hweshuwa kuti ndibudirire mubhizimusi rangu muzita raJesu.
6. Baba, ndibatanidze kune vanhu chaivo kuti vandibatsire kubudirira mubhizinesi muzita raJesu.
7. Baba, nditungamire kunzvimbo chaiyo uko bhizinesi rangu rinokura muzita raJesu.
8. Baba, vhurai maziso angu, kuti muone mhinduro kuzvinhu zvese zvakamirira mumabhizinesi angu muzita raJesu.
9. Ndinozivisa kuti bhizinesi rangu richabudirira mushure mekurongeka kwaIsaka muzita raJesu.
10. Ini ndinoparidza kuti hapana chombo chakagadzirirwa bhizinesi rangu chingabudirira munaJesu zita amen
11). Baba, kuraira nhanho dzangu mushoko renyu muzita raJesu
12). Baba, ndinoparidza nhasi kuti nekuti Jesu ndiye mufudzi wangu, handife ndakashaiwa gwara zvakare
13). Baba, kuraira nhanho dzangu kune munhu chaiye uye panguva chaiyo
14). Baba regedzai nhanho dzangu kunzvimbo chaiyo muzita raJesu.
15). Baba, kuraira nhanho dzangu kune vanhu chaivo muzita raJesu
16). Baba rongedzai nhanho dzangu pabasa chairo, basa uye / kana bhizinesi muzita raJesu
17). Baba musandiperekedze mumiedzo, asi ndinunurei kubva pane zvakaipa zvese muzita raJesu
18). Baba, shoko renyu ngarive renhamba rangu bhuku rekutungamira kubva nhasi zvichienda muzita raJesu
19). Wedu Womweya Unoyera, uve wangu wekutanga chipangamazano kubva nhasi zvichienda muzita raJesu
20). Ndatenda baba nekupindura y minamato muzita raJesu
21). Baba ndinokutendai nekundikomborera nehungwaru hukuru
22). Baba, ngwara dzenyu ngadzitungamirire muzuva rangu kutaura zviitwa muzita raJesu
23). Baba, mundirove pamwe nemweya wehungwaru pandinomhanya nhangemutange yehupenyu muzita raJesu
24). Ngwara ngazvionekwe mumabasa angu ezuva nezuva muzita raJesu
25). Baba ndipeiwohungwaru pamaitiro andinoita nevanhu zuva nezuva munaJesu nam
26). Baba ndipeiwo hungwaru mune hukama nemumwe wangu muzita raJesu
27). Baba ndipeiwohungwaru mune zvinoenderana nevana vangu muzita raJesu
28). Baba ndipeiwo huchenjeri mukubata newangu muhofisi muzita raJesu
29). Baba ndipeiwo huchenjeri mukubata nevandinogarisana navo muzita raJesu
30). Baba ndinokutendai nekundipeya nehungwaru huchenjeri muzita raJesu.
Previous nyaya21 Pfungwa dzeMunamato Kune Vabereki
inoteveraMakumi makumi mashanu Minamato yeMinamato yeMisangano yeMinamato
40 Minamato yeminamato inopesana nekutuka kwemhuri
Kunamata Kunongedzera Kupokana Nekukanganisa
Mapisarema 27 Minamato Yekunamatira Yekudzivirira
Munamato WeKuchengetedzwa Kwemhuri Uye Mhuri